Home » Featured » NAB SHAQAALAHA DIB U EEGIDDA SHARCIYADA SHARCIYADA MAGAALADA IYO MACLUUMAADKA TECHNOLOGY CONFERENCE
Ururka Qaranka ee Wargeysyada ayaa aqbalay waraaqo farsamo oo loogu talagalay Shirkadda Isboortiga iyo Warfaafinta Teknolojiyada (BEITC) ee 2019 NAB Show, qabtay April 6-11 ee Las Vegas.
Shirkadda Isboortiga iyo Warfaafinta Tiknoolajiyadda waxaa loogu talagalay injineerada farsamada iyo farsamoyaqaannada, injineerada qandaraas bixiya, kuwa soo saaraha qalabka warbaahinta, shirkadaha kala duwan, injineerada injineernimada, injineerada R & D, xirfadlayaasha IT iyo xirfadlayaasha warfaafinta ee la xidhiidha. Shirku wuxuu ka kooban yahay waraaqo farsamo oo la xaajoodaya fursadaha ugu dambeeyay iyo caqabadaha soo wajaha injineernimada iyo warbaahinta-warshadaha IT xirfadlayaasha caalamka oo dhan.
NAB Show waxay raadiyaan dadka soo bandhigeya fikrado cusub iyo fikrado khaas ah oo ku saabsan isbeddellada muhiimka ah iyo tiknoolajiyadaha mustaqbalka ee raadiyaha, telefishanka iyo mawduucyada warbaahinta tiknoolajiyada. Dhamaan soo jeedimaha qoraalka ayaa looga baahan doonaa inay ku jiraan xulashada hal mawduuc ee xiisaha ku qoran 2019 BEITC Wac Xogta Waraaqaha.
Soo jeedinta waxay ku xiran tahay dib-u-eegidda asaagga, iyo waraaqaha farsamooyinka leh ee cilmi-baaris asal ah ama kuwa aadka loo tixgelinayo waxay si aad ah u tixgeliyaan. Dhammaan waxyaabaha la soo jeediyey waa in lagu soo bandhigaa tababbar, qaab-dalbasho la'aan. Soo jeedimaha si qumman u kicinaya wax soo saarka ama adeegga ma la aqbali doono, inkastoo soo jeedinta sharraxaysa tiknoolajiyada hoose ee loo adeegsado badeecadaha ama adeegyadda laga yaabo in la tixgeliyo.
Waqtiga kama dambaysta ah ee soo jeedinta waraaqaha waa October 26, 2018. Qoraallada waraaqaha loo xushay in lagu daro barnaamijka 2019 BEITC waxaa lagu ogeysiin doonaa Nofeembar 2018. Guji halkan macluumaad dheeri ah iyo soo gudbinta qorshe.
NAB Show, oo la qabtay April 6 - 11, 2019, Las Vegas, NV, USA, waa shirkii ugu ballaadhnaa ee dunida ugu weynaa oo ku saabsan isu duwidda warbaahinta, madadaalada iyo tiknoolajiyadda. Iyadoo ku dhowaad 100,000 ka soo qaybgalay dalalka 165 iyo 1,700 +, NAB Show waa suuqa ugu dambeysa ee xalalka ka gudbiya ficilada caadiga ah iyo shidaalka dhaqaalaha sheekooyinka. Laga soo bilaabo abuurista ilaa isticmaalka, goobaha kala duwan iyo jinsiyadaha aan xad lahayn, NAB Show waa meesha aragtida caalamka isugu inuu keeno content nolosha siyaabo cusub oo xiiso leh.
2016 NAB Show 2016 NAB Show Job Fair 2016 NAB Show News Broadcast Awards Beat Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Idaacadan Convention Broadcasting Convention NAB 2015 NAB 2016 NAB Show NAB Show 2016 xirfadaha show NAB NAB Show Las Vegas NAB Show Diiwaangelinta NAB16 nabshow National Association of warbaahinta Show Post Production Adduunka	2018-10-30
Previous: Engineer Vision Systems Engineer
Next: WAXYAABAHA LAGU HESHIIYAY EE LOOGU TALAGALAY CIYAARAHA NIDA AFKA